थोरै-थोरै पनि नपिउनुहोस् मदिरा, एक बुँदाले पनि बर्बाद बनाउन सक्छ
मौसम बदलियो, सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्छ कि अब मौसमले च्यालेन्स गर्‍यो, पिउनुपर्छ । वास्तवमा पिउनका लागि सातै बार कुनै न कुनै बहाना त निस्किहाल्छ । तर, हामीलाई थाहा हुँदैन कि मदिराको थोपा-थोपाले कसरी हाम्रो शरीरलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको हुन्छ ? कसरीले यसले हाम्रो आर्थिक-सामाजिक जीवन बर्बाद बनाइरहेको हुन्छ ।
हालसालै भएको भएको एक अनुसन्धानका अनुसार मदिरा पिएपछि एक मिनेटभित्र यसले हाम्रो शरीरलाई कसरी नोक्सान गर्दछ, भन्नेबारे स्पष्ट पारिएको छ । यसअघि भएको अनुसन्धानहरुमा थोरै थोरै रक्सी पिउँदा शरीरलाई हानी नोक्सानी नहुने बताइएको थियो । तर, नयाँ अनुसन्धानले अरु नै कुरा गरेको छ ।
नयाँ अनुसन्धानका अनुसार, रक्सीको प्रत्येक थोपा शरीरका लागि हानिकारक छ । पुरुषको दाँजोमा महिलालाई यसले छिटो नोक्सानी पुर्‍याउँछ । यसले बाँझोपन बढिरहेको छ । रक्सी धेरै पिउने बच्चाको पनि विभिन्न कमजोरी र विकारहरु भेटिएको अनुसन्धानले बताएको छ । कतिपय बच्चाको त अंग नै विकास हुन नसक्ने हुन्छ ।
रक्सीको अत्यधिक मात्राले पुरुषको हर्मोन टेस्टोस्टेरोनलाई प्रभावित गर्दछ । यदि कुनै पुरुषले हप्तामा तीनपटक वा त्यसभन्दा धेरै रक्सी पिउँछ भने उसलाई इरेक्टाइल डिसफङ्क्सनको समस्या देखिन्छ । यसको अर्थ रक्सी धेरै पिउने पुरुषको लिंग उत्तेजना नहुने र भए पनि शीघ्र पतन हुने समस्या देखिन्छ ।
रक्सीको अत्यधिक सेवनबाट भ्रूणलाई घातक अल्कोहल सिन्ड्रोम नामको रोग देखिन्छ, जसबाट बच्चाको समुचित विकास हुन सक्दैन । यदि तपाईं दैनिक रक्सी पिउनुहुन्छ भने यसले तपाईंको आन्तरिक अंगको सबैभन्दा बढी नोक्सान गरिरहेको हुन्छ ।
मदिरा अत्यधिक पिउनुअघि र पिएपछिको कलेजोको अवस्था ।
अत्यधिक रक्सी सेवनबाट कलेजो कामै नगर्ने गरी बिग्रिन्छ । अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरुले लिभर सिरोसिसको चिन्ता जाहेर गरेका छन् । उनीहरुले रक्सीका कारण कलेजो बिग्रने मानिसको संख्या संसारभरी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
यसरी सजिलै छाड्न सकिन्छ धूमपानको लत
ग्रीन चियाले प्रजनन क्षमतामाथि नराम्रो असर गर्दछ –अध्ययन
सुत्नुअघि भुलेर पनि नगर्नुस् यी गल्तिहरु !
खानासँगै पानी पिउनु यसकारण हुनेछ स्वास्थ्यका लागि घातक
सुत्नुभन्दा अगाडि अँधेरोमा अवश्य गर्नुहोस् यो काम
कम सुत्दा आउन सक्छ मृगौलामा खराबी
हामीले खुबै मनपराउने यी सात कुरा खाली पेटमा खानु विष समान !
सातामा दुईपटक सम्भोगले फाइदैफाइदा
हाम्रो शरीरसँग जोडिएका छक्क पार्ने यी तथ्यहरु !